यौ,न स,म्प,र्कको बेला महिलाहरु किन आँखा बन्द गर्छन ? अर्घाखाँचीबुलेटिन
| २०७८ सावन १९ गते ०१: ३७ मा प्रकाशित
यौ,न स,म्प,र्कको बेला महिलाहरु आँखा बन्द गर्नुका कारण १ मानिसका विभिन्न खालका आवश्यकताहरु हुन्छ । जीवनयापन गर्नको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार देखि लिएर सबै खालका आवश्यकताहरु अति महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ । त्यतिमात्र नभई यौ,न सम्बन्ध हरेक दम्पत्तिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैका लागि गरिएका हजारौं अध्ययन र अनुसन्धान सार्वजनिक भएका छन् ।
यसैक्रममा एउटा अर्को अध्ययन पनि भएको छ कि यौ,न स,म्पर्कका बेला महिलाहरु किन आँखा बन्द गर्छन अध्ययन भन्छ । यदि कोही महिला यौ,नस,म्पर्क,का बेला आँखा बन्द गर्छिन् भने यसको अर्थ हुन्छ उनी पुरै मजा लिइरहेकी छिन् । अर्थात पाटनरले उनलाई चरम सन्तुष्टि दिइरहेका छन् ।
अध्ययन अनुसार ९३ प्रतिशत महिला यौ,नस,म्प,र्कमा चरम सुखको अनुभव तब गर्छन् जब उनको आँखा बन्द हुन्छ । यदि यो समयमा आँखा खुला हुन्छ भने उनको ध्यान आफ्नो पार्टनरमा जान्छ । जसका कारण उनले चरम सन्तुष्टि पाउँदैनन् । एउटा अर्को अध्ययनमा यो कुरा पनि स्पष्ट भएको छ कि जून समयमा महिला च,र,म सुखमा हुन्छन् त्यो बेला उनीहरु चाहेर पनि आँखा खोल्न सक्दैनन् ।
अध्ययनको दाबी छ कि जसरी सुतेको समयमा कसैले चाहेर पनि आँखा खुला राख्न सक्दैन् त्यसैगरी महिलाले पनि च’र’मसुखको समय चाँहेर पनि आँखा खोल्न सक्दैनन् । यद्यपी त्यो समयमा महिलाको ग्लैड’ग्रन्थी,वाट तरल रफ्तारमा हुन्छ, जसले दिमागलाई आँखा बन्द गर्नका लागि सन्देश दिन्छ ।
धर्तीमा पाइला टेकाउने आमा र संसार चिनाउने बुवा नै भगवान !
बेचिएको छ जिन्दगी : बिष्णु प्रसाद पराजुली
बाटो बिरायौ साथी (कविता): जनक पौडेल
युवा नेतृत्व खोइ ?
म अझै निदाउँन चाहन्छु: बिष्णु प्रसाद पराजुली
अर्घाखाँची पुन:कोरोना संक्रमित बढ्दै आज मात्र १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि (सम्पूर्ण विवरण सहित)
जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीलाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
माधव नेपालको पार्टीले गरेको पदाधिकारी चयनले पार्टी बिभाजन केवल पदका लागि मात्र थियो भन्ने पुष्टि गर्‍यो - नेता गैरे
१० बुदे सहमतिको कार्यान्वयनले एमाले ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो : युवा नेता गैरे